भाग्यमानी छोरो – Part 28 - फेरी चियाबारीमा2- Naughty Nepali
Home » Incest Sex Story » भाग्यमानी छोरो – Part 28 – फेरी चियाबारीमा 2
फेरी चियाबारीमा 2
मेरो लाँडो निकै रातो भएको थियो, साथमा उनको चाक पनि निकै रातो देखिएको थियो । मैले चाकमा चिक्दाचिक्दै नै विकेशको लाँडोले मुखमा फुसी ओकलिसकेको थियो । “माचिक्ने मुजी ! आमालाई चिक्नकै लागि यति टाढा आईपुगेको छस् अनि एकैछिनमा खलास !” “हिजो तँ हिंडेदेखिनै चिक्याछैन नि जाँठीलाई… रण्डीले आज यहाँ चिकाउनका लागि मलाई रातभर तडपाएर राखी नी ?” “मुजी ! तेरो आमा र बहिनीको फोटो नाङ्गो बनाउँदा बनाउँदा मैले आफ्नी आमालाई पनि चिक्न भ्याईसकें, तँ अझै आमाको चाक सुँघेर बस् !” “हँ ! के भन्छस् मुजी पहिला त मलाई खुब गाली गरेको थिईस् त ? म भन्दा दुईकदम अगाडी बढेर चिकेछस् त आफ्नो आमालाई… ! अनि बहिनीलाई नि चिकिस् ?” “पहिला भन् तैले चिकिस् तेरो बहिनीलाई ?” “अँह आजसम्म मौका पाएको छैन ! फेरी आमाले माने पो !” “थुक्क मुजी ! अब कसैले आफ्नो पुती छोडेर अर्काको पुतीमा चिक्न जा भन्छ त मुजी…? रुबीना बहिनीलाई त हामी बाउ-छोरा मिलेर डि.पी. हान्न भ्याईसक्यौं…” “ओई महेन्द्र त्यसोभए आमा साटेर चिक्ने हो त ?” “यस्तो कुरामा जबरजस्ती गर्नु त हुँदैन… म आमालाई कन्भिन्स गर्ने कोशिस गर्छु नि ?” म विकेशको आमाको चाकमा अझै पनि चिक्दै थिएँ, विकेशको आमाले भनिन् “एउटा अघिनै खुलित्त परेर बस्यो अर्को चाकबाहेक अन्त आँखै लगाउँदैन… कस्ता जाँठाहरुको फेला परेछु !” मैले विकेशको आमाको चाकबाट लाँडो बाहिर झिकें अनि पुतीमा छिराएर ल्वाम् ल्वाम चिक्न थालें अनि भनें “ओई मुजी भालुको ब्यागबाट पछ्यौरा निकालेर भुईंमा ओछ्याई त ? आज यो राँडीको पुतीलाई ठिक पार्नुपर्*यो ?” बोल्न नपाउँदै विकेशले आमाको झोला खोल्यो र पछ्यौरा निकालेर दुई बुट्यानको बिचमा हल्का खाली ठाउँमा ओछ्यायो । त्यसपछी मैले विकेशको आमालाई त्यो पछ्यौरामाथी लगेर चिक्न थालें, विकेश फेरी आमाको मुखमा लाँडो छिराएर चुसाउन थाल्यो ।
जब विकेशको लाँडो फेरी ठन्कियो, मैले विकेशलाई पछ्यौरामा सुत्न लगाएँ अनि विकेशको आमालाई विकेशको खुट्टातिर फर्किएर पुतीमा लाँडो छिराएर मच्चिन भनें र आफूले उनको मुखमा लाँडो छिराईदिएँ । एकछिनसम्म विकेशलाई चिक्न दिएपछी म पनि तल झुकेर विकेशको आमाको पुतीलाई चलाउन थालें, विकेश उनको पुतीमा चिकिनै रहेको थियो । उनको पुती खेलाउँदा खेलाउँदै मैले विस्तारै लाँडोलाई उनको पुती नजिकै पुर्*याएर विकेशको लाँडोसँग घर्षण गराउँदै उनको पुतीमै छिराउने कोशिस गरें, विकेशको आमाले मेरो त्यो प्रयाश:लाई विरोध गरिन् “नाई नाई दुईटै एकै ठाँउमा त गाह्रो हुन्छ…” मैले उनको बुब्सलाई हत्केलाले थप्काउँदै पिट्दै निपललाई दुई औंलाको बिचमा समातेर तान्दै छोड्दै भनें “जाँठी ! तँलाई दया माया गर्न यहाँ ल्याको हो र ? चिक्न ल्याको हो ? चिकुञ्जेल अनि पुती कामै नलाग्ने भएसम्म चिक्ने हो तँलाई !” त्यसपछी मेरो लाँडो विकेशको आमाको पुतीमा विकेशको लाँडोसँगै घर्षण गराउँदै छिराएँ । “भर्जिनको पुती भएपो… माया गर्नु !” निकैबेरसम्म विकेश र मैले उसको आमालाई पुतीमा दुईटै लाँडो छिराएर चिक्दै गयौं । विकेशको आमा आफ्ना मुखबाट उत्साहित रुपमा सित्कारका आवाजहरुले चियाबगान गुञ्जाउँदै थिईन् । बेलाबेलामा म उनका बुब्सलाई भिजेका कपडा निचोरझैं निचोर्थें र निपललाई चिमोटेर आफूतिर तान्दै छोड्ने गर्थें । चिक्दाखेरी विकेशको आमाको अनुहारमा देखिएको भावभङ्गीमाले मलाई झनै रोचकता प्रदान गरिरहेको थियो । निकैबेर उनको पुतीमा दुवै लाँडोले चिकेपछी मैले आफ्नो लाँडो बाहिर निकालें अनि विकेशलाई उठ्न लगाएर आफू पछ्यौरामाथी उत्तानो परेर पल्टिएँ अनि धरहराझैं ठडिएको लाँडोमाथी चाकको प्वाल सोझ्याएर विकेशको आमालाई बसाएँ, त्यसपछी पछाडीबाट हात अगाडी ल्याएर उनको बुब्सलाई मजाले निचोर्दै तलबाट धक्का बढाउन थालें, विकेशले फेरी आफ्नो आमाको पुतीमा लाँडो छिराएर चिक्न सुरु गर्*यो । चिक्दा चिक्दै निकै बेर भईसकेको थियो, मैले लाँडोलाई फुसी सहित विकेशको आमाको चाकमै छोडिदिने विचारले भनेँ “भालुआमा ! चाकभित्रै झार्दिम !” “नाईं रण्डोछोरा मेरो मुखभित्र फुसी झारेर भोक-प्यास मेटाईदे !” विकेशको आमाको चाकबाट लाँडो झिकेर म उठें अनि उनको मुखमा लाँडो छिराउँदै भनें “जाँठी मेरो फुसी चाख्न मन लागेको होईन ?” विकेशको आमाले टाउको हल्लाउँदै मेरो कुरामा सहमति जनाईन् । मैले विकेशको आमाको कञ्चटनिर दुवै हातले समातेर टाउकोलाई स्थिर बनाउने कोशिस गरें अनि उनको मुखमा लाँडोलाई लगातार कोच्दै गएँ । जब मेरो लाँडोको जरासम्म उनको मुखभित्र छिर्*यो,
विकेशको आमाले निकै सकस अनुभव गरिरहेकी थिईन् । मेरो लाँडोले उनको मुख टम्म भरिएपछी मैले उनको नाकमा दुई औंलाले समातेर ३०-३५ सेकेण्डसम्म थुनिरहें अनि लाँडोले उनको मुखको गहिराईसम्म चिक्दै गएँ, गाह्रो भएकोले होला विकेशको आमाले मुखबाट प्रशस्त र्*याल छोड्न थालेकी थिईन् र उनको मुखबाट निस्केको र्*याल चिउँडो हुँदै पोकासम्म पुगिरहेको थियो । मैले फिल्ममा देखेका सुनेका सबै तरिकाबाट बहिनीलाई, सुभद्रालाई, सुभद्राको बहिनी मन्दिरालाई, आफ्नै आमा अनि सानीआमा र विकेशको आमामाथी प्रयोग गरिसकेको थिएँ भन्दा हुन्छ । मैले अब लाँडोलाई रोक्न सक्दिन भन्ने भएपछी विकेशको आमाको मुखबाट लाँडो बाहिर निकालेर लाँडोले विकेशको आमाको अनुहारमा प्याट्ट प्याट्ट हान्न थालें र त्यही समयमा मेरो लाँडोले स्वत:स्फूर्त रुपमा फुसीको पिचकारी छोड्न थाल्यो । विकेशको आमाको निधार आँखाको परेलामा नाकको टुप्पामा पनि फुसीका द्रवहरु अडिए, मेरो लाँडोले झारेको फुसीलाई जस्ताको जस्तै छोडेर विकेशको आमाले मेरो लाँडो शान्त भएर नरम नभईञ्जेलसम्म चुसिरहीन्, ऐन मौकामा विकेशले पनि उनको बुब्सभरी पिचकारी छोड्यो र आमालाई लाँडो चुसाउन सुरु गर्*यो । मैले विकेशको आमालाई पछाडीबाट समातेर बुब्सलाई एकार्कासँग घिसाउँदै विकेशले झारेको फुसीलाई दल्दै गएँ र केहिबेरमा बुब्स च्यापच्याप लाग्ने हुँदै बिलायो । जब विकेशको आमाले पछ्यौराले मुख पुछ्ने कोशिस गरिन् । मैले उनलाई रोकें अनि भनें “गाडीमा पुगुञ्जेल मुख नपुछ्नु ?” “मान्छेले देखे के भन्लान् ?” “कसले थाहा पाउँछ र, कसैले थाहा पाएछ भनें तपाईंको पुतीले एउटा नयाँ लाँडोको अभिलेख राख्ला नि त ?” त्यसपछी मैले आफ्नो कपडा लगाएँ, विकेशले पनि कपडा लगायो । जब विकेशको आमाले स्कर्टलाई तल सारेर छोप्ने कोशिस गरिन् मैले रोक्दै भनें “एकछिन त चियाबारीमा नाङ्गै घुम्नु परेन जाँठी !” अनि फेरी स्कर्टलाई माथीनै सारिदिएँ र चाकमा प्याट्ट हान्दै भगाएँ । उनले आफ्नो टि-शर्ट समाउन खोज्दा मैले खोसें र फेरी बुब्समा प्याट्ट हानें अनि दौडदैं बाटोबाट निकै पर पुगें । जहाँबाट पब्लिकको हामीलाई डर हुन्थ्यो त्यहाँ पुगेर म अडिएँ विकेशकी आमा फेरी स्कर्टलाई तल सारेर दौडदैं म भएठाँउ आईपुगिन् र मैले टि-शर्ट लगाउन दिएँ । विकेश पछी पछी पछ्यौरी समातेर आइपुग्यो । मैले विकेशको हातबाट पछ्यौरा समातेर विकेशको आमाको अनुहारमा लागेको फुसी पुछिदिएँ तर केहि फुसी सुकेर कक्रक्क परेर कत्लाजस्तो देखिएको थियो । गाडीमा बस्नेबेलामा चालकले सोध्यो “म्यामको अनुहारमा के लागेजस्तो छ !” मैले पनि तुरुन्तै जवाफ दिएँ “घुम्न आको ईलामको चिसोको मस्ती लागेको होला नि ?” विकेशको आमा मज्जाले हाँसिन् ।
chak chikeko katha, chikeko katha, erotic story nepali, inscest sex story, inscest story, iscest nepali sex story, lado chusi, lado puti ma, lado puti ma chikeko story, naango boobs, nepali erotic story, nepali inscest story, nepali puti, nepali puti chikeko, nepali sex story, Pallo Ghar Ko Neha Le Lado Chusi, puti chikeko, puti chikeko nepali, puti chikeko story, puti mai jhardiy, puti mai jhardiye, rubina, rubina chikeko, sex katha, sexy katha, चियाबारीमा